20th Floor Sea View Condo @ Unixx!! - I-Airbnb
20th Floor Sea View Condo @ Unixx!!
Isimanga se-20th floor Bay Buka amagumbi okulala angu-2 ifulethi lokugezela @ Unixx Condo!!
Leli yifulethi eliyigugu elisethwe ezingadini zasemaphandleni e-Pratumnak Hill, e-Pattaya. Inezindawo ezinhle ezihlanganisa indawo yokuzivocavoca namachibi okubhukuda. I-Unixx iseduze nezifunda zokuthenga nezokuzijabulisa kwasebusuku kanye nokuba seduze nezinkundla zokudlala igalofu ezingaphezu kuka-20 ne-Cozy Beach, i-Pattaya Beach ne-Jomtien Beach konke kuseduze kakhulu.
I-Unixx inezindawo ezinhle kakhulu. Indawo yokubhukuda yomndeni engamamitha angu-33 ine-Jacuzzi, indawo yokushununuza amanzi nokuqwala amadwala. Indawo yokubhukuda yezingane inama-bubble jets. Kunezitezi ezibanzi zelanga nezindawo ezinomthunzi. Amabala anezingadi ezihlelwe kahle ezinengadi yokudlala yezingane, izindawo zokuzivocavoca zangaphandle, umzila wokugijima kanye negalofu elincane elibeka okuluhlaza.
Futhi, ukupaka imoto ngaphansi komhlaba, ukuphepha kwamahora angu-24 nge-CCTV kanye nedeski lokwamukela kanye negumbi lokuhlanza izingubo.
Indawo / Amakamelo Amakamelo ahamba
phambili, wonke anekhishi nendawo yokudlela, kanye nama-TV esikrini esicaba aneziteshi zezintambo zamazwe ngamazwe.
Ama-shower anamanzi ashisayo kanye nomfutho wamanzi omuhle.
Wonke amakamelo anemishini yokupheka, sinikeza amathawula nezinto zokugeza lapho ufika.
enhle kakhulu ku-Pratumnak Hill ethandwayo nemizuzu embalwa nje ukusuka ku-Travel Street. Indawo iyinhle kakhulu njengoba i-Jomtien ne-Pattaya isikhashana nje kuphela.
I-Pattaya inempilo yasebusuku edumile enezinkulungwane zama-bar, ama-pub nama-disco. I-Pattaya inemibukiso emihle kakhulu, ukuthenga kwezinga lomhlaba, izimakethe eziyingqayizivele zase-Thailand, izindawo zokudlela zamazwe ngamazwe & zase-Thailand kanye nemidlalo yamanzi kanye nezinkundla zokudlala igalofu ezingaphezu kuka-20.
I-Unixx yimizuzu embalwa ukusuka esikebheni ukuya e-Koh Larn (isiqhingi) enamabhishi amahle nolwandle lwamakhorali.
I-Unixx yi-condo entsha kunazo zonke e-Pattaya, enezindawo zezinkanyezi ezingu-5 nokubukwa kanye nokuba sendaweni elula kangaka kuyindawo enhle yokuhlala yezithandani, abahamba bodwa, uhambo lwebhizinisi, amaqembu, imindeni, abathandi bezokuzijabulisa kwasebusuku.